Goal-Setting ပြုလုပ်ခြင်းကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ❓ - Vanguard
Home » Goal-Setting ပြုလုပ်ခြင်းကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ❓
Goal-Setting ပြုလုပ်ခြင်းကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ❓
Posted by Vanguard on June 16, 2020 .
Performance ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတောင် လက်တွေ့မကျ တဲ့Goal တွေ၊ အကျိုးမရှိတဲ့Goal တွေကြောင့် စိတ်အားတက်ကြွစွာ အလုပ်လုပ်လိုစိတ်တွေ ပျောက်ဆုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အကယ်၍ Performance Review တွေကိုသာ စိတ်မတက်ကြွစရာအခြေအနေမှ၀န်ထမ်းတွေအတွက်သင်ယူလေ့လာပြီးတိုးတက်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေအဖြစ်သာပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…
Goal တွေကို Performance တိုင်းဖို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာအောင် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Goal-Setting (ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် သတ်မှတ်ခြင်း) ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်တွေ အများအပြားယူရတာနဲ့ အရမ်း သက်ရောက်မှု မရှိဘူးဆိုတာကို Organization အများစုက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Goal-Setting ပြုလုပ်ခြင်းကို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Performance နဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးအမြတ်တွေ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ McKinsey ရဲ့ မကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကို သတ်မှတ်(Setting Goals) ရတာက ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို မရောက်ရောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ရသလိုပဲ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမယ့် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့အခါ အောက်မှာဖော်ပြမယ့် အချက်(၃) ချက်ကို မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။
1. Goal-Setting ပြုလုပ်ရာတွင် ဝန်ထမ်းတွေကို အစမှ အဆုံးထိ ပါဝင်ပါစေ
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် တွေ ချမှတ်ရတဲ့ တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်က ဝန်ထမ်းတွေ တိုးတက်စေဖို့အတွက်ပါ၊ ဒါကြောင့် ဒီ Process တစ်ခုလုံးမှာ သူတို့တွေ ပူးပေါင်းပါဝင်မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ ရေတို၊ ရေရှည် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကို ချမှတ်ပေးဖို့ အကူအညီ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပြီး ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်ရှိစေဖို့ အလားအလာကို တိုးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ Goal တွေကို ချမှတ်ပေးတဲ့အခါမှာ SMART (Specific – တိကျရမယ်, Measurable – တိုင်းတာနိုင်ရမယ် , Attainable – အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရမယ်, Relavant – သင့်တော်ရမယ် ,Time Bound – အချိန်အကန့်အသတ်ရှိရမယ်) နဲ့ ကိုက်ညီဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒါတွေကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီက သူတို့ရဲ့ Goal တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ သူတို့နဲ့ ပိုသက်ဆိုင်လာတယ်လို့ ခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို Goal တွေ ချမှတ်ဖို့ တွန်းအားပေးတာက Performance တက်ဖို့ အကူအညီဖြစ်စေပြီး ရှေ့ဆက်တိုးတက်ဖို့အတွက် Motivation ဖြစ်စေပါတယ်။
2. တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါစေ
ထိရောက်တဲ့ Performance Management ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေထဲက (91%) ရဲ့ ဖြေကြားချက်အရ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေက လုပ်ငန်းရဲ့ Priorities တွေနဲ့ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရည်မှန်းတွေက လုပ်ငန်းရဲ့ ပင်မ ပန်းတိုင်ကို ပုံဖော်ဖို့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Organizational Goal တွေကို Functional Objective တွေအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပြီး အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် Goal တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီအရေအတွက်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပါပြီ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းက ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Performance ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိစေတာကြောင့် တာဝန်ခံမှုနဲ့ Performance ကို ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။
3. အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပန်းတိုင်တွေကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါစေ
Goal တွေက အမြဲပြောင်းလဲနေတာ မဖြစ်သင့်ပေမယ့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲရလွယ်တာမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကို ရောထွေးပြီး ပြုလုပ်နေကြအမှားကတော့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစမှာ ချမှတ်လိုက်တဲ့ Goal တွေကို Review ပြန်ပြီး မလုပ်သေးခင်မှာ မေ့သွားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Goal တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း တကယ့်ပြင်ပ အခြေအနေတွေက အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Goal တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်တာမျိုး မပြုလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တကယ်လက်တွေ့နဲ့ ဝေးကွာပြီး Motivation ကျသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ့်ဆိုလိုရင်းက Goal တွေက အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ Moving Target ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလိုပြုလုပ်ခြင်းက Motivation တက်စေမယ့် Performance Management စနစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Goal တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို စိတ်ပျက်စေပြီး Motivation ကျစေတဲ့ အကြောင့်အရင်း မဖြစ်ဖို့ သတိထားရပါမယ်။ Goal တွေကို သင့်တော်စွာ ချမှတ်နိုင်တဲ့အခါ Commitment တွေကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပြီး Organizational Health ကို အဓိကမောင်းနှင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။